Ukukhusela kwezonyango, ukungakhathaleli ukucoceka, iimveliso zeKhemesti- i-ORIENT
Isigqubuthelo sobuso esilahlwayo, iingubo zokhuselo, ikhaka lobuso, iiglavu, iigoggles ezikhuselayo, imaski yobuso ye-FFP2, iimpahla ezingalukwanga, isixhobo sokuhambisa izihlangu, iSanitizer yesandla nangoko njalo njalo. "
jonga iinkonzo zethu +
Ukujonga uxinzelelo lwegazi, imitha yeswekile yegazi, incam yomnwe yeoksijitha, ithemometha engafakwanga infrared, iMesh nebulizer, Aneroid Sphygmomanometer, iStethoscope, isixhobo sesepha njalo njalo. "
Isirinji elahlwayo, isirinji ekhethwe kwangaphambili, iblade yotyando, i-lancet yegazi, uthotho lweetyhubhu zoqhaqho, iintlobo ezahlukeneyo zeekiti zotyando, izixhobo zotyando, ukuvalwa kwenxeba, ibhegi ye-ostomy, ukunxiba kwezonyango njalo njalo.
Ikomityi yomchamo, isitya sepetri, ikomityi yesampulu, ityhubhu yegazi, isixhobo sesampuli, ityhubhu yovavanyo, isampulu yokuqokelela isampulu yentsholongwane nokunye.
Ukuthengisa okuTshisayo kweMpilo kunye neMveliso yeMpilo
3ply ubuso obulahlwayo buso bohlobo I, Uhlobo ...
Professional Medical Banokubulawa zokhuseleko ...
Ikhithi yesampulu yentsholongwane ye-ORIENTMED
ORIENTMED 5 maleko ezilahlwayo KN95 ubuso mas ...
IINKCUKACHA ORIENTMED ORT3010 ICU
I-ORIENTMED yasekwa ngo-1991. Siyinkampani yobungcali ikakhulu ebandakanyeka kwimveliso zonyango. Ngokusekwe kumgangatho ogqwesileyo kunye namaxabiso afanelekileyo, siphumelele igama elinoxanduva kwiindawo ezininzi ezahlukeneyo, ezinje ngeJamani, iFrance, iKazakhstan, iRussia, iKuwait, iAustralia, uMzantsi Afrika, iUnited States njalo njalo.
Besisoloko sigxile kumgangatho ophezulu kunye nenkqubo yokuvelisa iimpahla zethu ukusukela ekuqaleni kokusekwa kobudlelwane beshishini kunye nabathengi bethu emhlabeni. Siza kuqhubeka nokuchuma ukwenza inkonzo yethu ibengcono kwaye silindele ukuseka ubudlelwane obuthembekileyo nabathengi abaninzi kumgca weemveliso zonyango ezilahlwayo kungekudala.
Imveliso zeMpilo kunye nezoNyango
Icandelo lakho lophuhliso lwemveliso
Besisoloko sigxile kumgangatho ophezulu kunye nenkqubo yokuvelisa iimpahla zethu ukusukela ekuqaleni kokusekwa kobudlelwane beshishini kunye nabathengi bethu emhlabeni.
Indawo yakho yokugcina kunye nokuqina emva kwenkonzo yokuthengisa
(Ukulandela rhoqo kwaye uphendule ngokukhawuleza)
Isebe lakho lobhaliso
(Ngaphezulu kweminyaka engama-20 kule ntsimi, sigcwele amava)
(I-360 ° VR iVidiyo, iVidiyo, ingxoxo yeVidiyo 1. Amanyathelo okuvelisa Ingxelo 2. Uvavanyo ngaphambi kokuhambisa. Uvavanyo kumzi mveliso wakho omtsha)
Icandelo lakho lokuhambisa
(Qinisekisa zonke iinkcukacha kunye nefoto yakho)
ISebe lakho loPhuhliso lweShishini
(Iingcebiso ngentengiso, Izitshisi, iPosta)